Oniversity FJKM/Fitokanana – FJKM
Miroso amin’ny fananganana trano lehibe fahatelo.
Notanterahina ny marainan’ny sabotsy 13 Jona 2020 ny fanompoam-pivavahana sy fametrahana ny vatofehizoron’ny trano vaovao fahatelo eo an’ivon’ny onivesity Ravelojaona Ampandrana. Ny filohan’ny FJKM, Dr IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi Mpitandrina no nitarika izany asa vavolombelona izany. Ny Romana 13.8-10 no nitondrany hafatra roa mazava manodidina ny hoe: Aza avela hisy tsy voaloa ankoatry ny fifankatiavana ary aza reraka mifankatia. Mba ho asa vita ao anaty fifankatiavana izao asa izao hoy ihany izy teny am-pitsofan-drano ny asa nialoha ny fametrahana ny vatofehizoro.
Ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana RAKOTONDRAINY Jaona, Mpitandrina no nitondra amim-bavaka ny asa, ary ny Doyen eny amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga kosa ny Dr. RAMAMBASON Laurent Mpitandrina no nanao ny vavaka teo am-pametrahana ny vatofehizoro .
Saika hanorenana kianja » complexe sportif » ity toerana ity saingy noho ny hamaroan’ ny mpianatra dia trano afahana manitatra efitrano hinarana ary efitrano lehibe hivavahana « Chapelle » no haorina hoy ny rektora Dr Ratsimandisa Zo, Mpitandrina. Ny 13 Mey 2020 teo no nitokanana ilay trano faharoa misy efitra 13. Anisan’ny niatrika ity fotoana ity: ireo filankevi-pitantanana eo anivon’ny oniversity Ravelojaona sy ireo mpampianatra isan-tokony.
FJKM website team